ဒီဟာလေးကိုအရင်ဖတ်ပါ။ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ဒီမှာဒေါင်းပါ ကိုနှိပ်ပါ ပီးရင်5စကန့် စောင့်ပါ SKIP AD ကိုနှိ်ပ်လိုက်တာနဲ့ အော်တိုဒေါင်းလုပ်ကြလာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ
Given 2941 thank(s) in 366 post(s)
10-31-2016, 02:19 AM (This post was last modified: 10-31-2016, 02:20 AM by ဒေါ်က်တာမလေး.)
အရင် ကျောင်းသားဘ၀ ... တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ပေါ့.. နယ်ကနေ ရန်ကုန်လာကျောင်းတက်တော့ အဆောင်မှာနေရတာပေါ့.. တိုက်ခန်းပထမတစ်ထပ်လုံး ယောကျာ်းလေးတွေကြီးပဲ ... မေဂျာတူခြင်းငှားနေကြရော.. ရပ်ကွက်ထဲမှာ တော်တော်လန်းတဲ့စော်တစ်ယောက်ရှိတယ်.. လန်းတယ်ဆိုလို့ အဲဒီစော်ချောတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး .. Body မိုက်တယ်..၀တ်တာစားတာ လန်းတယ်..
ကိုယ်တွေကလဲ တောသားမြို့ရောက်ဆိုတော့ ငမ်းတာပေ့ါ.. လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာလဲ ထိုင်ငမ်းပေါ့.. တစ်ရက် ကိုယ်တစ်ကောင်တည်း မနက်စောစော လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတုန်း.. အဲဒီစော်က မုန့်လာဝယ်ရော... ဘေးကစားပွဲမှာထိုင်ပြီး သူ့ဖုန်းကို သူကလိနေတယ်.. ကိုယ်ကလဲ မသိမသာ ငမ်းပေါ့... စော်ကလဲ မြင်သွားတော့ ပြုံးပြတယ်.. ကိုယ်လဲ ပြန်ပြုံးပြ ဘာညာအိုကေ အကြည်ဆိုက်နေတာပေါ့ဗျာ ... အဲဒီက စတာပဲဗျို့ ... ငါဘယ်ဆိုးလို့လဲပေ့ါ အမှန်တော့ ကိုယ်ဟာကိုယ် အတွေးဝင်သွားတာ.. နောက်ရက်ကစပြီး .. ကိုယ်ကလိုက်ငမ်းတာပေါ့... ဘယ်သွားသွား ..နောက်က ကိုယ်ပါတယ်... တစ်ရက်ကျတော့ စော်က စာအုပ်အငှားဆိုင်ထဲဝင်သွားတော့ ကိုယ်လဲ စာအုပ်ငှားသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ကပ်လိုက်သွားရော .. စော်အနားကပ်ပြီး .. ပြုံးပြလိုက်တော့ စော်က လိုက်နေရတာ မပင်ပန်းဘူးလားတဲ့.. ကိုယ်ကလဲ မပင်ပန်းပါဘူး မမရယ်.. မမ မျက်နှာလေးက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်လေ... ဖုန်းလေးပေးပါလား ... ဆက်လို့ရမလား ..ဆိုတော့ စော်က စာအုပ်နောက်ကျောမှာ ဖုန်းနံပတ်တစ်ခုရေးပေးပြီး.. ဒီစာအုပ်ငှားသွားလေ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပဲ ... ကိုယ်ကတော့ တောသားမြို့ရောက်ဆိုတော့ ဟဲဟဲ ငါ တယ်ဟုတ်ပါလားပေ့ါ... နောက်ရက်က စပြီး လမ်းထိပ်က အများသုံးဖုန်းဆိုင်ကနေ ဖုန်းဆက်... စကားတွေပြန်ပြော .. အိုကေနေတာပေါ့.. တစ်လလောက်ကြာတော့ ရပ်ကွက်ထဲ တရားပွဲလုပ်ရော .. အဲညမှာ စတာပဲဗျို့ ... ရပ်ကွက်ထဲက လူတော်တော်များများက တရားပွဲရောက်နေတော့ ကိုယ်ကလဲ ဂွင်ပဲဆိုတော့ စော်ကြီးဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး .. မမ အားတယ်ဆိုရင် စကားပြောကြမယ်လေ .. ထွက်ခဲ့ပါလားဆိုပြီး ပြောတော့ .. စော်က မမ အိမ်ဘက်လာခဲ့လေ.. ဖေဖေရော မေမေရော တရားပွဲ သွားကြတယ် ..မ တစ်ယောက်တည်းကြောက်လို့တဲ့ ... ကိုယ်လဲ သုတ်ခြေတင်ပြီး ပြေးတာပဲ ... အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ၀င်ရမှာလား မ၀င်ရဘူးလား ... ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ... ကိုယ့်မှာက ဖုန်းလဲရှိတာ မဟုတ်တော့ အခုခေတ်လို လှမ်းခေါ်လို့လဲမရ ... ခဏနေတော့ မမ ဆင်းလာတယ်... ခြံတံခါးလေးဖွင့်ပြီး ..လာ မြန်မြန်ဝင်လေတဲ့ . . ကိုယ်လဲ မြန်မြန်ဝင်ပြီး.. အိမ်ထဲမှာ ထိုင်နေရတာပေါ့.. ခဏနေတော့ လာ မမ အခန်းလိုက်ပြမယ်တဲ့ ကိုယ်လဲ .. ဂွင်ပေါ့ ဆိုပြီး ဟုတ် တစ်လုံးပြောပြီး စွေ့ကနဲပဲ ... သူ့နောက်က လိုက်တာပေါ့ အခန်းထဲရောက်တော့ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ထိုင်ပြီး သူ့ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပြတယ်... အကျီက T-Shirt လိုမျိုးပဲ အပါးအကျပ်နဲ့ဆိုတော့ ..နို့တွေကလဲ ထင်းနေတာပဲ ... သူက ဓာတ်ပုံပြပေမယ့် ဒီကောင်က တဟင်းဟင်းနဲ့တံတွေးမျိုချနေတာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး ... သူကလဲ သိသိကြီးနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာ .. တစ်ချက်တစ်ချက် ကိုယ်ဘက်လှည့်ကြည့်တဲ့ အကြည့်က ... သိတယ်မဟုတ်လားဗျာ... မာယာတွေပါတယ်လေ... ကိုယ်လဲ မမ မျက်စိလေးခဏမှိတ်ထားပါလား ..လို့.. သူကလဲ အင်း တဲ့ ...မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတော့... ကိုယ်လဲ Kissing စဆွဲရော .. စိတ်မှ မထိန်းနိုင်တော့တာ .. စော်က ခဏတော့ ရုန်းတယ်... ဟန်ပြလေး .. ပြီးတော့ ငြိမ်သွားရော ... ကိုယ်ကလဲ ဇာတ်လမ်းစတာပေါ့ ... လက်က အကျီပေါ်ကနေ နို့လေးတွေကို ပွတ်လိုက် ချေလိုက် ... ထမီထဲကို လက်က ၀င်သွားလိုက် သူက ကိုယ့်လက်ကို အတင်းကိုင်ထားလိုက်... နောက်ဆုံး သူ ဟင်းခနဲ သက်ပြင်းချပြီး... ဘာမှ မတားတော့ဘူး... ကိုယ်လုပ်သမျှ ငြိမ်ခံနေရာ .. နို့ကို စို့ပြီး .. ထမီထဲ လက်ရှိုပြီး အထဲကိုနှိုက်တော့ အားပါပါး နည်းနည်းနောနောအရည်တွေမဟုတ်ဘူး ...ကိုယ်လဲ ဘေးက ခုတင်ပေါ်အတင်းဆွဲခေါ်ပြီး အပေါ်ကနေ အတင်းတက်ဖိထားတာ ...စမန်က ငယ်ထိပ်ရောက်နေပြီလေ... ပုဆိုးချွတ်ပြီး အတင်းကိုထည့်တော့တာပဲ ... စော်က အစကတော့ ပါးစပ်အတင်းပိတ်ပြီး အော်လဲ မအော်ဘူး.. နောက်တော့ မနေနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်... အား အားအား နဲ့ စအသံထွက်လာရော... ကိုယ်ကလဲ ကောင်းခန်းရောက်နေရော... အတင်းစွတ်လိုးတာပေါ့ ခဏနေတော့ ကိုယ်က ပြီးသွားရော..... အဲမှာ ဇာတ်လမ်းက စတာဗျို့ ... ပြီးတော့ ကိုယ့်ပုဆိုးလေး ပြန်စွတ်မလို့လုပ်တုန်း အိမ်ရှေ့မှာ သမီးရေ .. ခြံတံခါးသော့လေး လာဖွင့်ဦးလေတဲ့... သေပြီဟ ..ဆိုပြီး... သူလဲ ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ.... ကိုယ်လဲ ဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှန်းမသိ... မမ မမအကျီမြန်မြန်ဝတ်ပြီး တံခါးဖွင့်ပေးလိုက် ကျွန်တော် မမ ကုတင်အောက်မှာ ပုန်းနေမယ်လို့ ... သူလဲ ယောင်ယောင်မှားမှားနဲ့ ဟုတ် ဟုတ်ဆိုပြီး .. အကျီတွေအမြန်ဝတ်ပြီး.. တံခါးသွားဖွင့်တယ်... အဲလိုနဲ့ ... ကိုယ်လဲ ကုတင်အောက်မှာပုန်းနေတာ မလှုပ်ရဲဘူး... ဘယ်လောက်ကြာသွားမှန်းတောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် မသိဘူး .. ကဲ သမီးရေ အဖေတို့ အိပ်ပြီ ငါ့သမီးလဲ စောစောအိပ် ဘာညာပြောပြီး သူ့အဖေနဲ့ သူ့အမေက ဟိုဘက် ဘေးအခန်းကို ၀င်သွားရော .. တစ်အောင့်လောက်ကြာတော့ သူလဲ ပြန်ဝင်လာပြီး .. တံခါးကို ဖွဖွလေး ပိတ်တယ်... ကိုယ်လဲ အဲဒီတော့မှ ကုတင်အောက်က ထွက်ပေါ့..
ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ... သူကခဏနေရင် နောက်ဖေးတံခါးလိုက်ဖွင့်ပေးမယ်.. အဲဒီကနေ ပြန်ထွက်လိုက် .. ပြီးရင် အိမ်ဘေးကနေ ခြံကိုကျော်တက်လိုက်နော်တဲ့... ကိုယ်လဲ ဟုတ်ပေါ့ ... စကားလဲ အများကြီးမပြောရဲဘူး.. ဟိုဘက်က ကြားရင် သေမှာလေ... အဲလိုနဲ့ သူလဲ နောက်ဖေးလိုက်ပို့တယ်.. ကိုယ်လဲ ပြန်ခါနီး မမ ခဏဆိုပြီး Kissing ဆွဲတယ်... Heat တက်နေတာ မပြီးသေးတော့ အဲဒီ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ စော်ကို မတ်တပ်ရပ်ပြီး ထမီမပြီး ထပ်ဆွဲတာ... အဲတုန်းကတော့ စမန်ထနေတာရော ... ကြောက်နေတာရော ... ဘာအသံမှကို မထွက်ရဲဘူး... စော်ကလဲ လုံးဝအသံမထွက်ရဲဘူး.. လိုးတာကလဲ ဖြည်းဖြည်းလေးမှ ဖြည်းဖြည်းလေး...လိုးလို့ကလဲ ဘာကောင်းသလဲမပြောနဲ့ဗျာ... အဲဒီအချိန်မှာ လိုးရတာကို ဘာနဲ့မှ ယှဉ်လို့မရဘူး..တကယ်... အော် အခု ပြန်တွေးတော့မှ တော်သေးလို့ ငါထောင်ထဲမရောက်တာလို့... ...
.... (စကားမစပ် နောက်မှ သိရတာက အဲစော်က ယောကျာ်းနဲ့ ခိုးပြေးထားပြီးသား ... အိမ်က ပြန်ခေါ်ထားတာတဲ့ .. ဟင်းဟင်း ဒါကြောင့် သူလဲဆာ ကိုယ်လဲဆာ ဖြစ်နေတာကိုး)
Thanks given by: B B , ဆြာသြ , poeti1102 , Maug Gyi , unnamed988 , calebet , xxxminxxx , မောင်နေနိုင်သူ , kwee , yelinkyaw , thecaveman , kyawkoo , pp1 , tunbo878@gmail.com
Current time: 01-18-2017, 09:45 AM